बार्सिलोना स्टार लियोनल मेस्सीले खोले यस्ता रहस्यहरु
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेस्सी क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन अर्जेन्टिनामा व्यस्त रहेका छन् । यसै क्रममा लामो समयपछि उनले एक मिडियासँग खुलेर अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।
'बार्सिलोना हार्दा छोरालाई स्पष्टिकरण दिनुपर्छ'
'मेरो लागि फुटबलभन्दा पनि परिवार महत्वपुर्ण'
बार्सिलोनाका फरवार्ड लियोनल मेस्सी एउटा म्युजियम पनि खोल्न सक्छन् । कारण, उनीसँग सयौँका संख्यामा ट्रफीहरु रहेका छन् जुन उनले आफ्नो खेलकुद जीवनमा जितेका थिए र जित्ने क्रम जारी रहेको छ ।
आर्सिनी वेंगरले भने– ‘मेसी इतिहासकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्’
एजेन्सी । इंग्लिस क्लब आर्सनलका पूर्व प्रशिक्षक आर्सिनी वेंगरले अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका फरवार्ड लियोनल मेसी इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट फुटबलर भएको बताएका छन् ।
मेसीले पाए पाँचौ गोल्डेन बुट
काठमाडौं । अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले पाँचौ पटक गोल्डेन बुट जितेका छन् । मार्साले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गोल्डेन बुट सन् २०१८ मा मेसीले सर्वाधिक गोल गरेको कारण पाएका हुन् ।
मेसीले पाए प्रिमियो अल्डो रोभिरा अवार्ड
काठमाडौं । अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । बिहीबार मेसीले ‘प्रिमियो अल्डो रोभिरा’ अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् ।
मेसीले तोडे रोनाल्डोको रेकर्ड, खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै भनेः मलाई थाहै थिएन
काठमाडौं । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले युभेन्ट्सका खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रेकर्ड तोडेका छन् । बुधबार राति नेदरल्याण्ड्सको क्लब पीएसभी आइनहोभेनविरुद्ध गोल गर्दै मेसीले एउटै क्लबबाट च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको रेकर्ड बनाएका हुन् ।
मेसी र रोनाल्डो बलोन डी’ओरको उत्कृट तीन मै परेनन् !
काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका खेलाडी लियोनल मेसी तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बलोन डी’ओरको उत्कृट तीनमा नपरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । टुट्टो स्पोर्टस् तथा कोरियर डेला सेरमा प्रकाशित समाचार अनुसार यस पटकको बलोन डी’ओरमा मेसी र रोनाल्डो उत्कृट ३० मै सीमित भएका छन् ।
लियोनल मेस्सीको ‘मिडल नेम’ को रहस्य
काठमाडौँ । सायद कमैलाई थाहा छ लियोनल मेस्सीको मिडल नेम पनि रहेको छ ।
लियोनल मेस्सीको अजबगजबको लाइफस्टाइल !
अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेस्सी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनको प्रतिस्पर्धा क्रिस्चियानो रोनाल्डोसँग हुने गर्छ । व्यवसायिक फुटबल खेलेरै उनले अर्वौ सम्पत्ति कमाउन सफल भएका छन् ।